Uyenza njani isiphumo esingunxantathu sepikseli | Izidalwa ezikwi-Intanethi
Uyilo lwegraphic yenye yeefayile ze- iinkalo zolwazi ethe saa ngakumbi kwihlabathi namhlanje.
Oku kungenxa yendlela abantu abanokulufikelela ngayo olu qeqesho ngaphandle kwesidingo sokungena kwiziko leyunivesithi ukuze bakwazi ukusebenzisa ulwazi olufundiswa ngaphakathi kubo kwaye kukuba namhlanje, nabani na ozimiseleyo nikela iiyure kuqeqesho nokuhlela Unokwenza imisebenzi emangalisayo, yonke into iya kuxhomekeka ikakhulu kukuzinikezela kunye nokuzibophelela umntu ngamnye afuna ukubanika imisebenzi yabo.
Uyilo lwegraphic lubandakanya izinto ezimbini eziphambili, uyilo kunye nobugcisa, indibaniselwano eye yazisa inani elikhulu labantu abanomdla wokusebenza kolu hlobo lwenkqubo yokuhlela. Singathetha nangomba obandakanya inkcubeko kwaye kubonakala ngathi kukho Iindawo zoyilo lwegraphic ezinikezelwe kuyilo lweemodeli zombhalo isimbo sasezidolophini, oko ke kuzisa inani elikhulu labathengi kunye nabayili abanomdla ekunikezeleni ngeenkonzo zabo ngokwenza lo mmandla.
I-Adobe Photoshop yiyo enye yeenkqubo ezidumileyozikhona. Ngapha koko, abantu abaninzi bahlala benxibelelana noyilo okokuqala ngale software, ke namhlanje siza kukubonisa amanyathelo afanelekileyo sebenzisa isiphumo esingunxantathu sepikseli.
Isifundo sokudala isiphumo sephikseli engunxantathu
Sikhetha umfanekiso esifuna ukuwuhlela.
Sivula umfanekiso kwiFotohop kwaye senza ii-2 maleko imvelaphi.
Sikwindawo ethi "Imvelaphi yekopi" kwaye senze isixhobo sotshintsho simahla nge-CTRL / Cmmm + T. Kukhetho 3, silungiselela i-skew ethe tye kwimenyu kwesixhobo, silungelelanisa ukutyekela kwiidigri ezingama-45 kwaye sigqibe utshintsho ngo-Enter.
Ngaphandle kokuhamba kumaleko esiwakhethileyo, siya ku isihluzo / iPikseli / iMosaic kwaye sibeka ubungakanani beseli kwi-40.
Sibeka umthamo woluhlu ukuya kuma-50.
Sebenzisa ugcino "Khuphela iNgxowa-mali" kwaye emva koko phinda amanyathelo afanayo awenziweyo nge "Fondo Copia 2" kodwa utyekelo oluchaseneyo, Oko kukuthi, nge-engile ye -45 degrees.
Sikwasebenzisa icebo lokucoca ulwelo elifanayo.
Sisebenzisa isixhobo senguqu kwakhona kumaleko kwaye sisete i Ukujikeleza ngokuthe tye kwiidigri ezingama-45, ukunciphisa i-opacity ukuya kuma-70%.
Sisebenzisa icebo lokucoca ulwelo ngokufanayo kumaleko ongasemva kunye ne-voila, umsebenzi wethu uya kuba phantsi kwepikseli engunxantathu.
La ngamanyathelo onokuwathatha ukuvelisa isiphumo esingunxantathu sepikseli. Amanyathelo afuna umonde, nangona kunjalo nangokuziqhelanisa, oku kuya kuba lula kwaye kube lula ukuwenza, oya kusivumela zibandakanya obu buchule kuluhlu lwethu lweendlela kunye nokusetyenziswa apho sinokuhlela kwaye siguqule imifanekiso ethile.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Ukudala kwi-intanethi » ngokubanzi » Tutorials » Uyenza njani isiphumo sephikseli esingunxantathu
Ungabutshintsha njani ngokulula ubuso bomntu nge-Photoshop